Ndifuna ukuya kuhlangana a kubekho inkqubela - IVIDIYO INCOKO. Dating-intanethi!
Njani mna buza kubekho inkqubela ilungelo emva Ntlanganiso? (Uthando kunye kubudlelwane, Umhla)
kuba elula umnqweno kuba i-umkhenkce cream? Mna mema kuwe
Molo, ndiza m, kwaye kubekho inkqubela wam iklasi ikhangeleka e kum kakhulu rhoqo kwaye kanjalo kwi-ukumelwa ka-yure elandelayo kumNdingathanda ikhusi imibuzo, nokuba ngaba uqinisekile ukuba nam private ufuna ukuba badibane nabo. Ndenza njani kwenza ukuba eyona? Uyakwazi kuqala buza ukuba yena ke, phezulu ukuya kwi-veki iphelileyo. Ukuba ufuna akhange na kwakucwangcisiwe nantoni na, ngoko ke kufuneka ucele ukuba ngaba ufuna ukwenza into ethile kunye. Ukuba yakho ngokufanayo umdla kuba hayi Ewe, ngenye indlela, nje kudla i-umkhenkce-cream, cinema (nkqu ukuba akunyanzelekanga ukuba fumana le ubuqu kangaka, ngenxa yokuba ingaba uthetha malunga Ewe ngenene), okanye ividiyo imidlalo? Kufuneka ube kancinci projekthi ngoko uza sele uyazi ukuba le nto nje i-kwesizathu okanye real nokuzinikela.
Kulungile siphila kulo. Buza wakhe ukuba yena sele whatsapp, ngoko ke kufuneka kukunika yakhe inani, imiyalezo ukubhala, kunibiza kwi-ngokuhlwa kwaye cela into, yena ke ngokwenza emva esikolweni. Ngaba beka phantsi kwisixeko evela kuwe ke ndimbuza a Ezimbalwa Sait. ngoko ke, i-Okungokunye phendla. Andiqondi ukuba private Intlanganiso phantsi isine amehlo, ukuba awuyazi kuwe kanti, ebukekayo unye. kuba abanjalo Iintlanganiso a Wigman, eyona umhlobo uthatha nani njengoko uthatha yakho eyona umhlobo. i-atmosphere kukuba kude ngaphantsi isigaba sentetha. Kwaye eyona bonke ezimeleyo territory. kuhlangana nawe kwisixeko kwaye behamba, Hayi kuthi ukuba ubufuna ukuthenga omtsha pair of pants. kwaye ngoko Coke Burger. kwaye goodbye, namhlanje Kwaba mnandi ngokwenene ukusebenza nani, sifuna ukuqalisa Dating kwakhona? Kude kangakanani kuwe bahlangana omnye Umntu (umz., ukwenza phezulu Iintlanganiso, ngokwembalelwano, njl. njl.) ude ube kudla kwayo okokuqala, l kwaye ikhangeleka, nokuba into ukusuka kwelinye icala kwenzeka? 🤔 Okwangoku a kubekho inkqubela ikhangeleka e nam yaphula, rhoqo, kwaye lisoloko wam n lowo. Ongumhlobo wakho, kwaye baya rhoqo kuza kakhulu vala kwaye xa ndiya kubuyela jikelele sihamba kude. Babefuna ukuba buza ndenze ntoni. Yena usoloko ikhangeleka e kum ngoko ke engrossed. Ndiza kwi-iklasi ndiyakholwa kwi kukuba kulungile ukuba ndicela wena yintoni mba kunye naye. Heee freight car Zoluntu, Kukho wam iklasi a kubekho inkqubela Ndithanda kakhulu. Siye rhoqo thetha ngamnye ezinye nomzimba uqhagamshelane njenge Tickling, ukukhanya iibhokisi, njalo-njalo.
Ndinga iselwa njenge ukuhlangabezana yakhe, kodwa hayi njani ukufumana eyona amandla.
Kukho kubekho inkqubela kwi-iklasi yam ngu ehleli elandelayo kwenye mna kanye ngeveki, kwaye mna kanjalo intetho. Ngamanye amaxesha ujonga kwi-iindidi r bar. Akunyanzelekanga ukuba into omawuyenze, ndithanda ngayo kakhulu kodwa ndiyazi. Ndinga isibheno kuwe zange ukuba Badibane nabo. Molo, ndinguye ubudala, kwaye kukho kubekho inkqubela kwi-iklasi yam. Yena ufumana super mnandi kwaye ngenene pretty.
Siyaqonda ngamnye ezinye iselwa kakuhle (rhoqo thetha ngamnye enye, rhoqo ride efanayo Ibhasi ekhaya).
Uvumelekile ukuba ehleli kwi-ucingo kwaye imathematika ukongeza kum, ngoko ke sinako ukunceda ngamnye enye. Ngesingesi, mna jonga ngonaphakade ngoku kwaye kwakhona phezu kwayo, kwaye uyeke ujonge, ngoko ke phezu kwam (nkqu ukuba andikho elindile, uyancuma rhoqo), nto leyo yindlela elungileyo umqondiso, njengoko ndizifundile.
Kwenu malunga efanayo Humor njengoko ndiya kwenza ntoni ukuba kuthetha, yena laughs kanjalo.
Yena laughs kakhulu, kwaye lonto yenza a relaxed, cheerful kwaye casual impression kwi kum. Ukuba ndiza honest, ndiza kanjalo kancinci ngothando kunye nawe. Wandixelela, umzekelo, kanjalo kakhulu malunga ngokwakho. Yintoni mna appreciate kakhulu, ngenxa yokuba yena sele wandixelela izinto ezininzi ukuba ingaba zibalisa a kubekho inkqubela njengathi na guy. Ngoko ke, ndingathanda ukwazi njani ndinako isibheno kuwe ngomhla Intlanganiso, kuza phezu ngaphandle na stupid okanye embarrassing. Kulo mba ka kubekho inkqubela ndiqinisekile ukuba ndiya kuba Iqalile ukuba ukuba neentloni Ingoma kancinci, ingakumbi kwimeko i kubekho inkqubela apha. Kuba iimpendulo ndiyabulela kwangaphambili. kuba kwiiveki, entsha kubekho inkqubela, mna genuinely ngathi ngu-wam iklasi. Yena sits elandelayo kum. Ke ngoko, ndifuna ukuya kuhlangana kum, kunye yakhe ngoko budlelwane ngu bamisela. Kodwa ndenza njani ukwenza entsha? Apho kufuneka ndiya kuhlangana yakhe? Ndenze ntoni nge yakhe, kwaye yintoni ukuba yena unika kum basket? Hut umntu a ingcebiso kuba nam? Sisebenzisa kunye ubudala kwaye hayi yintoni uyakwazi ukuthetha ngayo malunga kwaye ngoko ke ufuna ukuya kuhlangana kunye nam, ndiyazi.
Ndithe nje wabuza a kubekho inkqubela ukusuka iklasi yam ukuba yena ufuna ukuba abe kunye nam.
Waze wathi hayi, kwaye ngoku, ngenxa andikho nicinge ukuba benze ntoni mna ekuseni yesikolo, njengokuba nayo kwi-iklasi yam. Ufuna ukuya kuhlangana kwam ngomso nge kubekho inkqubela ukusuka iklasi yam, ngenxa yokuba ayikho into ke sikwi koyika abe wenze into engalunganga. Ndine h Büches kubekho inkqubela kwi-iklasi yam, kwaye ndingathanda kuphuma abayo kwaye babefuna ukwazi ukuba ndimele emva kwentlanganiso, imibuzo okanye nokwakha budlelwane, kwaye kwangoko imibuzo. Molo ndinguye kwaye ifuna kwam ukuya kuhlangana kunye kubekho inkqubela, kodwa ngenxa na apho.
Ukwazi kwethu kuphela yi-emehlweni abo.
Kwi-Restaurant akunyanzelekanga ukuba ufuna ukuba ndiza ngothando kunye kubekho inkqubela ukusuka iklasi yam iyonke.
ke ngoku iinyanga emva kwexesha
Wena musa get ngayo ngaphandle kwentloko yam.
Ndiye ndijonge oko rhoqo kwi-classroom ukuba kwaye usoloko ucinga kuni.
Sathi kanjalo ukubhala kwaye yathetha esikolweni.
Mna ngenxa kodwa hayi nokuba yena sele inzala kum, ngenxa yokuba yena ikhangeleka e kum ngamanye amaxesha ngamanye amaxesha made kum nomsindo.
Kufuneka mna cela Intlanganiso? Kuqala: ndim ubudala kwaye kubekho inkqubela. Andikho ukuba pretty, ngokungafaniyo nezinye girls wam iklasi (ebukekayo, P). Au Erdem ndiza kakhulu ukuba neentloni. Ngoko ke: iklasi yam yi Boy. Nguye kakhulu ethandwa kakhulu kwaye phantse wonke kubekho inkqubela ngu ngothando ukuye. Ukususela kwiiveki ezimbalwa yena uqaphele kum iselwa kancinci, njengokuba nathi zikholisa ukwenza hardly nantoni na kunye. Yena ikhangeleka e nam iklasi ngamanye amaxesha xa yena ibetha kum nge bahlobo bam kwi ibala lokudlala, yena ume elandelayo kum kwaye hayi elandelayo kwezinye. Ngoko thina thetha kwaye yena usoloko yenza kum Laugh. Kungenjalo, unabo na kwenzeka oku.
Kubalulekile kancinci confusing kuba kum, ngenxa yokuba yena ayizange wathi yintoni.
Andiqinisekanga nokuba ndithi kuye uthando. Mna kanjalo kuba akukho amava ngayo kwaye wayecinga ukuba uyakwazi kundinceda molo, ndiza indoda nomfazi, kuba nge-girls ingaba ngqo phantse akukho uqhagamshelane, ngoko ke abucala. Abaninzi bahlobo bam rhoqo bhala nge-girls okanye kuhlangana phezulu kunye nabo ngamanye amaxesha. Andiyazi into mandiyenze okanye ukuba ndimele nje linda okanye into ethile? Ithemba ukuba ingaba ilungile iimpendulo. Heee, iklasi yam a kubekho inkqubela kukuthi, mna kakhulu nabafana fumana ngaba ukhangela kwi kum ukususela ukuza kuthi ga ngoku. Xa mna ke jonga wena smiling e kum. Ukuba sino izifundo kunye zethu Kunye iklasi, yena usoloko sits elandelayo kwezinye guys ukususela Ezimeleneyo iklasi ukuba kwam, yena ukuba neentloni quasi-iyonke ke yena uthetha nam kodwa kunye nezinye guys phantsi kwenu. Ungathanda kum okanye hayi engakuthandi ukuthetha nam ngenxa yokuba yena likes kum? Ndine crush kwi-boy kwi-iklasi yam, ndiza kamsinya, abe sele. Andiqondi kuba guts ukuze bambuze ukuba lowo uthanda kum. sino efanayo Izinto ezichaphazela, ukuba lowo wenza a joke yena usoloko ikhangeleka kum ukubona ukuba mna laugh, yena usoloko ikhangeleka e kum xa mna laugh kunye nezinye guys kodwa abo bakhe abahlobo tease kuye wathi sukuyihoya kum mna rhoqo, ngenxa yokuba yena likes kum, ubuncinane, kodwa kutheni waye hlala kwi uluhlu (ngubani ngaphandle umbuzo olandelayo kuye) kubekho inkqubela igama asiyiyo, nje yam. mhlawumbi ndine itolikwa yakhe nod ezingachanekanga kwaye lowo akuthethi ukuba ukuthanda kwam ngamaxesha onke? ndincede. Ndiqinisekile ukuba M ndifuna ukucela Zoluntu apho ungaya nge kubekho inkqubela njenge "kuqala Umhla".
Apho ukuya namhlanje, ulutsha nabantu, ukuba niya kuhlangana phezulu? Apho ungakwazi yiya? bar oko ufuna uthetha malunga xa uqala Kuhlangana? Kwaye yam yokugqibela umbuzo kukuba, ukuba girls ingaba ithetha ukuba omtsha boy uthi: "uyakwazi ukuba okuninzi fun" (kugqwetha) ngaba kuthetha ukuba uyakwazi rum naye, silly? Onayo kwam umhla kunye kubekho inkqubela.
Mna anayithathela sele ubhala kuba ngeveki nge kubekho inkqubela ukuqonda kwethu ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku esihle kakhulu. Onayo yakhe malunga iindaba ebhaliweyo. Kufuneka ulinde mna kancinci ngaphezulu okanye ngaba ngoku kuba imibuzo? Njengoko ixesha elide njengoko ubhala nge kubekho inkqubela wakhe emva intlanganiso? Xa ndiya kuhlangana girls e Ividiyo Dating. kwaye ngoko, ngomhla kunye ungathanda hamba, kufuneka ke ngoko ngenye ndimbuza nokuba niya kuhlangana kum okanye ngenye ndimbuza ukuba ngaba ufuna ukuya Kumhla kunye nam? Wam Ingxaki kunye nto kukuba kwi-Intanethi kwaye bahlobo bam opinions differ njengoko iyonke i-a bam ukuba ilizwi Umhla kubekho inkqubela ubeka kakhulu ngakumbi koxinzelelo kwaye kubi, abanye bacinga ukuba kufuneka kodwa ufuna umzekelo-icatshulwe Umhla ngoko ke kubekho inkqubela kanjalo ngenxa into endiza kuyenza. Ucinga ukuba? Lento yethu yokuqala Umhla ndifuna ukuya kuhlangana a kubekho inkqubela kodwa kungenxa yokuba na apho kwaye singenza ntoni kum unako ukunika abanye iincam enkosi kwangaphambili.
Xoxa kwi-intanethi roulette
첫 번째 시간에서 스윙클럽
ividiyo incoko amagumbi Dating ngaphandle ividiyo incoko dating incoko esisicwangciso-mibuzo roulette-intanethi ne-girls ukuhlangana kwenu kuhlangana phezulu kuba omnye-ixesha Dating ngaphandle ubhaliso kuba free esisicwangciso-mibuzo roulette nge-girls ividiyo ukuncokola nge-girls- ubudala free bukela ividiyo iincoko